I-pigment yethu ye-ceramic ibulele i-ceram ithe ibethelela ubomi obude, ngokukhawuleza, isantya esihamba rhoqo kunye nokungaxhathisi okhethekileyo kwiqondo lobushushu lobushushu.
Senza kwaye sibonelele ngomsebenzi ophezulu wokusebenza owenze ceram. Umxube wesayensi webatch yezinto ezibonakalayo, ukucinezela ngokufanelekileyo ii-DYES, kunye namaqondo obushushu afanelekileyo atshisiweyo, anike amanqanaba aphezulu okuqina kothuko olunzima. Izinto eziphezulu eziphezulu ezisetyenziselwa ukwenziwa kwayo, zidityaniswa nemveliso elawulwa ngononophelo, iqinisekisa ukutyeba ngaphezulu kwembetheko kwinqaba nganye, ngaloo ndlela ibonelela ngexabiso elingakumbi.
Esona sicelo sinemigangatho ebomvu ye-ceraramics, ubukhulu obuqhelekileyo
I-pigment ye-ceram ye-ceram ithe ceng ibe nethemba elingaphezulu kokungavisisani okuqhelekileyo ukuze kuqhekezwe phantsi kweemeko zobushushu obuphezulu. Iinqaba zethu zisetyenziswa kwiintlobo ngeentlobo zeekhilomitha ezona iipowder ezahlukeneyo. Sineemilo ezahlukeneyo kunye nobukhulu obufumanekayo kwi-COTE KOKUFUNA.
I-pigment ye-ceram ye-ceram ithe cer